Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Farenheit 911 (USA)
Farenheit 911 (USA)
US ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ဆိုတော့ Michael Moore ရဲ့ နာမည်ကျော် Farenheit 911 ကို စိတ်ဝင်စားကြ မယ်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမတ Bushရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးအချိန်ကတည်းက 911 နောက်ပိုင်း အကြောင်း documentary အနေနဲ့ရိုက်ထားတာပါ၊ လူကြိုက်များပြီး vodpod website မှာ နေ့တိုင်း link လာ လာလုပ်သမားနဲ့ Favorite မှတ်သမားများပါတယ်။ Youtube မှာလည်း ကြည့်သမားများပါတယ်။
Fahrenheit 9/11 is Academy Award-winning filmmaker Michael Moore's searing examination of the Bush administration's actions in the wake of the tragic events of 9/11. Moore looks at how - and why - Bush and his inner circle avoided pursuing the Saudi connection to 9/11, despite the fact that 15 of the 19 hijackers were Saudis and Saudi money had funded Al Qaeda. Fahrenheit 9/11 takes us inside that war to tell the stories we haven't heard, illustrating the awful human cost to U.S. soldiers and their families.
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၂၀၀၄ (2004)
အမျိုးအစား (Gerne) - နိုင်ငံရေး (Politics)